လက်နက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စကြားတာနဲ့ အရင်ဆုံး ဘာကိုတွေးမိတာလဲ? M16 သေနတ်လား ဒါမှမဟုတ် အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ အလံတွေရဲ့ သင်္ကတေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ Russian AK47သေနတ်လား? ဒါမှမဟုတ် ဂန္တဝင်မြောက်တဲ့ Smith & Wesson Revolver သေနတ်လား? ဒါပေမယ့် လက်နက်တွေကို နည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့ သာမန်သေနတ်ပစ်တာထက် ပိုပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အသံကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရော?
အဆင့်မြင့် နည်းပညာဟာ အခုခေတ်မှာ အဆမတန် ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့အတွက် တကယ့် လေဆာသေနတ်တွေတောင် တကယ်ရှိနေနိုင်ပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တစ်မူအထူးခြားဆုံး အံ့အားသင့်စရာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လက်နက်တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ အခုမေးခွန်းအတွက် အဖြေကိုသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ပြောတာကို ယုံလိုက်ပါ ဒါတွေက ခင်ဗျားတို့ တွေ့ဖူးတဲ့အရာတွေနဲ့ ဆီနဲ့ရေလို ကွာပါတယ် ဒီလို အင်အားကြီးပြီး ကြီးမားတဲ့သေနတ်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူတွေ တွေ့လိုက်တာနဲ့တင် ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်သွားရမှာပါ ဂျူလိုင်လ ၁၄ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ရဲ့ စစ်ရေးပြပွဲက ဒီလက်နက်ကို မြင်လိုက်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီသေနတ်က သူရဲ့ပစ်မှတ်ကို ဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာ ထိရောက်မှုကတော့ တကယ်ကိုး ပြင်းထန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် Nerod F5(နရော့တ် အက်ဖ် ဖိုက်)လို့ခေါ်တဲ့ ဒီသေနတ်ကို သက်ရှိရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ဖန်တီးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါဆို ဘယ်သူ့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာလဲ? သူ့အဖြေကတော့ စက်ရုပ်တွေပါပဲ ဒရုန်းတွေကို သေနတ်တွေ ရိုင်ဖယ်သေနတ်တွေ တပ်ဆင်ပေးပြီး အချိန်ခဏတာအတွက်တော့ တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်တဲ့ စက်ရုပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ဒီဒရုန်းတွေက စစ်မြေပြင်မှာ အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လည်း Nerod F5 ကို တီထွင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီသေနတ်ရဲ့ အပြင်ပိုင်း မှာတော့ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ သေနတ်ပြောင်းတွေ မပါပါဘူး အဲ့တာအစား သူ့မှာ electromagnetic interference generators တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ် ဒီအရာတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက် ရေဒီယို သတ္တိကြွစေတဲ့ ရောင်ခြည်တွေ ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ဒါက သေနတ်ပစ်ရသလို ပစ်မှတ်ချိန်စရာ မလိုတော့တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တစ်ပန်းသာနေမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမယ့် ရောင်ခြည်တွေကို ထုတ်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ဒရုန်းတွေဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည်ကြောင့် အထိန်းအကွပ်မဲ့သွားပြီး အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ ရေဒီယို အချက်ပြမှုတွေကို နှောင့်ယှက်ပြီး ဒရုန်းတွေကို သူ့စခန်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရကို တားဆီးရာကျပါတယ် ဒါပေမယ့် Nerod F5(နရော့တ် အက်ဖ် ဖိုက်)သေနတ်ဟာ ဒီမျိုးတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော သေနတ် မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုသေနတ်တွေကို ဒရုန်းတွေ များလာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုပြီးတော့ တီထွင်လာကြပါတယ် ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒရုန်းကာကွယ်တဲ့ သေနတ်ဟာ အမြင့်ပေ ၁၃၁၂ပေနဲ့ ၄၀၀ မီတာ အကွာဝေးအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဘယ်ဒရုန်းကိုမဆို ထိရောက်စွာ ပစ်ချနိုင်ပါတယ် ဒီလိုဒရုန်းတိုက်ဖျက်တဲ့ သေနတ်ရဲ့ အားသာချက် နောက်တစ်ခုကတော့ အနှောက်အယှက် ထုတ်လွှတ်တဲ့စက်ဟာ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ တစ်ပါတည်း ပါလာပြီးတော့ အဲ့ဒီစက်နဲ့ သေနတ်ကို အထူးသီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် ရေဒီယိုကင်းမဲ့ဇုန် ကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဒီဒရုန်းသေနတ်တွေက GPS အချက်ပြစနစ်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်
စက်သေနတ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်တောင်တစ်ခတ် အတွင်းမှာ ကျည်ဆန်တွေ အကုန် ကုန်သွားအောင် ပစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့မှာကန့်သတ်ချက် တစ်ခုရှိပါတယ် ဒါကတော့ ဒီသေနတ်တွေက တစ်ခါပစ်တိုင်းမှာ ကျည်တစ်ထောင့်ပဲထွက်ပါတယ်ဒါဆို တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ကျည်ဆန်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စက်သေနတ်ကရော? ဒီစက်သေနတ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ metal storm လို့ ခေါ်ပြီးတော့ သူ့မှာ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေ၊ အမြှောက်တွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သေနတ်ပြောင်းတွေ ပါတတ်ပါတယ် ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး လက်နဲ့ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့သေနတ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်မှုဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီစီမံကိန်း ဖန်တီးသူဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံသား Mike O’Dwyer ဟာ လက်နက်ရဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ပုံကို သေနတ်ပစ်တဲ့နှုန်းနဲ့ အစားထိုးပြီးတော့ သေနတ်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းအောင် တီထွင်ခဲ့ပါတယ် ဒီသေနတ်ရဲ့ လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာကတော့ မောင်းတံပဲဖြစ်ပါတယ် သေနတ်ပြောင်းတစ်ခုကို ကျည်ဆံတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကျည်ထည့်ကဒ်နဲ့ ကျည်ခုနစ်ခါထိုးလို့ရပါတယ် ဒီလို သေနတ်ပြောင်းတစ်ခုထဲကနေ ကျည်ဆံတွေအများကြီး တရစပ် ပစ်နိုင်ပြီးတော့ ကျည်ဆံတွေက ပစ်မှတ်ဆီကို သွေဖီမှုအနည်းဆုံးနဲ့ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ သေနတ်ပြောင်းတွေ အများကြီးရှိသလို တစ်ကြိမ်တည်း သေနတ်ပြောင်းအများကြီးနဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်း ကျည်ဆန်ပေါင်း ၁သိန်း၃သောင်း၅ထောင် ပစ်နိုင်ပြီးတော့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုလို ဘယ်ပစ်မှတ်ကိုမဆို အမှုန့်ညက်ညက်ကြေသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် metal stormကို ငြိမ်းချမ်းရေး ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဥပမာ မီးငြိမ်းသတ်တဲ့နေရာမှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်တဲ့ ဆေးတောင့်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ မီးငြိမ်းသတ်တာဟာ ဒီလို ဒြပ်စင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အလွန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် ဒီလို သေနတ်ပြောင်းတွေရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကရိုးရှင်းပေမယ့် ကျည်ပြန်ဖြည်တဲ့အချိန်ကို ကြာမြှင့်စေတာဟာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ပြစ်ချက်လို့ ခင်ဗျားတို့ရော အဲ့လိုမြင်လား?
၂၀၁၈ တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သံတမန်ဟာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ အကြားအာရုံ ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ဆရာဝန်ပြခဲ့ကာ သူဟာ ထူးဆန်းတဲ့အသံတွေကို ကြားယောင်နေတဲ့အကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ဒီထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဖြေရှင်းချက်ကတော့ သံတမန်ဟာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ မပြင်းထန်တဲ့ အသံလှိုင်း လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် စစ်တပ်က ဒီနိုင်ငံမှာ အသံလှိုင်းသေနတ်ကို လူတွေမသိအောင် သိုသိုသိပ်သိပ် အသုံးပြုနေကြတယ်လို့ တွေးထင်ခဲ့ကြပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေမကြားရနိုင်တဲ့ အသံတွေ ရှိပါတယ် Infrasound ဟာ လူတွေ ကြားနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းထက် နိမ့်ကျပြီးတော့ Ultrasound ရဲ့အသံလှိုင်းဟာ ပိုမြှင့်ပါတယ် ဒီအရာနှစ်ခုလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အသုံးချရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် Infrasound ဟာ အစာခြေဖျက်တဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုကျိုးသက်ရောက်စေပြီးတော့ Ultrasound ဟာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ဖြစ်စေပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအသံလှိုင်းတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ရှူးတွေဖြစ်တဲ့ နားအတွင်းရှိသွေးများနဲ့ အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတောင်မှ သေးငယ်မှုန်မွှားတဲ့ ဆူပွက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ် အရမ်းဖျက်ဆီးအားကောင်းတဲ့ Ultrasound ကို လူရဲ့နားနဲ့ မဆိုစလောက်သာ ကြားနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီအသံလက်နက်ရှိတာကိုး သိကြပေမယ့်် ဒီလက်နက်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အခုထိတော့ ရှင်းလင်တိကျစွာ မသိရသေးပါဘူး ဒီလိုသေနတ်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ ဘာပုံစံရှိလဲဆိုတာ ဘယ်သူတွေကများ သိကြမလဲ? ဒီအချက်တွေကြောင့် တစ်ဖက်ရန်သူကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရှင်းပစ်တာ အဖျက်အမှောင့်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသံလက်နက်ဟာ လုံးဝအံဝင်ဂွင်ကျမယ့် လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် မလား?
၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ရုရားစစ်သင်္ဘောအချို့မှာ အမြင်အာရုံ အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ သတင်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ဆိုလိုတာကတော့ ဒီလက်နက်က ရန်သူတွေကို ခဏတာမျက်စိကွယ်တာ၊ မျက်စိလည်လမ်းပျောက်တာတွေလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် မျက်စိအာရုံကို အမြင်မှာစေခြင်းတွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီလက်နက်တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်နက်တွေလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး လက်နက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်သွားရ ဥပမာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမွှေးပွပွ နဂါးလေးက ခင်ဗျားတို့ကို လက်ဖျက်ရည်သောက်ဖို့ သွန်ပေးနေတာမျိုး မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ ရောင်စုံ စက်ဝိုင်းတွေ အလင်းပျောက်လေးတွေ၊ စူးရှတဲ့အလင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံကို နှောင့်ယှက်မှာပဲ ဖြစ်တာကိုး မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် ဒီအစမ်းလေ့လာဆဲ လက်နက်ရဲ့နာမည်ကတော့ 5P-42 Fillin(eagle owl) ပဲဖြစ်ပါတယ် သူက အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ အလင်းတွန်းအားကို အသုံးပြုပီးတော့ သူ့ရဲ့ထိရောက်မှု အကွာအဝေးက ၁.၂မိုင် ဒါမှမဟုတ် ၂ကီလိုမီတာ အတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ် သူ့ကိုတီထွင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရန်သူတွေရဲ့လက်ကနေ ကိုယ့်သင်္ဘောကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျားတို့ရော ဒီလိုလက်နက်ရဲ့ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်လား? ပစ်မှတ်ချိန်တာကိုး အလိုအလျောက်စနစ်အဖြစ် ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော?
ဒီလို ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့လက်နက်တွေအကြောင်း ပြောတာနဲ့ သိပ္ပံကားတွေထဲက လေဆာသေနတ်တွေကို အရင်ဆုံး မျက်စိမြင်ယောင်လာကြမှာပါ အပူဓာတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို သုံးစရာမလိုပါဘူး အားကောင်းတဲ့ အလင်းတန်းဆိုရင်ပဲ လုံလောက်နေပါပြီ American Phasr Rifle သေနတ်ဟာ မသေစေနိုင်တဲ့ လေဆာ လက်နက် ဖြစ်ပါတယ် သူက ရန်သူကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ့်အစား မျက်စိကွယ်အောင်ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် အဲ့လိုလုပ်တာလည်း ထိရောက်တာပဲ မဟုတ်လား? မျက်စိကွယ်စေနိုင်တဲ့ လေဆာလက်နက်တွေကို စတီထွင်ခဲ့တာ အချိန်နည်းနည်းတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ UN သဘောတူညီချက်ရေးထိုးပွဲမှာ လုံးဝမျက်လုံးကွယ်စေနိုင်တဲ့ လေဆာလက်နက်တွေကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ Phasr(ဖေဆာ)သေနတ်ကတော့ အချိန်ခဏတာပဲ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တာပါ လေဆာနည်းပညာနဲ့ မျက်စိကွယ်အောင် တစ်ခုတည်း လုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဥပမာ Hellads မှာ ကျည်ဖူးတွေ အမြှောက်တွေရဲ့ရန်ကနေ အချိန်ပြည့် ကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ပါဝင်ပါတယ် ဘယ်မျိုးလဲ? လေဆာလက်နက်ထဲမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ အပူရဲ့ စွမ်းအားက အကန့်အသတ်ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ကျည်ဖူးက သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်ကို မရောက်ခင်အချိန်အတွင်းမှာတော့ ပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါတယ်
နည်းပညာမှာ အလင်းကို အသုံးမပြုဘဲ အပူကို အသုံးပြုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘာလဲ? ဒီလိုအရာက လက်တွေ့မှာ တကယ်ရှိနေပါပြီ သူ့ကို Active Denial System လို့ခေါ်ပါတယ် သူ့ကို ရဲတွေက အသုံးပြုကြပြီးတော့ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ လက်နက်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို သုံးပြီး ရန်သူရဲ့ အရေပြားကို ပြင်းထန်တဲ့ လောင်ကျွမ်းမှုလို ခံစားရတဲ့ အထိအတွေ့ကို ဖြစ်စေပါတယ် ဒါက တိုက်ရိုက်နာကျင်တာမျိုး ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးလိုတဲ့စိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ ဒီလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဟာ ချက်ချင်းနာကျင်စေတာ မဟုတ်ဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းကြာမှ နာကျင်မှုကို စခံစားရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကြုံတောင့်ကြုံခဲတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာတော့ လောင်ကျွမ်းစေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ် သေစေနိုင်လောက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလိုလက်နက်မျိုးကို ရဲတွေကိုင်တွယ်တာဟာ လူသားဆန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကြလား?
အသံကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုနေတာ အချိန်တော်တော်တော့ ကြာနေခဲ့ပါပြီ သာမန်အားဖြင့်တော့ လူတွေရဲ့နားကမကြားနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို အသုံးမပြုကြပါဘူး သေစေနိုင်တဲ့လောက်တာမဟုတ်တဲ့ အသံလက်နက်တွေမှာ အဲ့တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အရမ်းကျယ်လောင်တဲ့အသံတွေကို ထုတ်လွှတ်ပြီး တစ်ဖက်ရန်သူတွေကို တန့်စေပြီး ကြောက်လန့်အောင် နှောင့်ယှက်ပါတယ် ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ LRAD Sound Cannon ကို တီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလက်နက်ဟာ ၁၆၂ ဒယ်ဆီဘယ်လ် အထိမြင့်တဲ့ အသံအကျယ်ကြီးတွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ဒါကို မျက်စိထဲမြင်အောင် ရှင်ပြရမယ်ဆိုရင် ခေတ်ပေါ် ဂျက်လေယာဥ် တစ်စင်းဟာ ၁၃၀ ကနေ ၁၄၀ ဒက်ဆီဘယ်လ်ထိရှိတဲ့ အသံတွေကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ် တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒါက ဂျက်လေယာဥ်ဘေးမှာ မတ်တပ်သွားရပ်နေရသလိုပါပဲ LRAD Sound Cannon က ဒီထက်တောင် အသံကျယ်သေးတယ်ဆိုတော့ သူ့အသံကို ၅.၅မိုင် ဒါမဟုတ် ၉ကီလိုမီတာကနေတောင် အတိုင်းသားကြားရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလက်နက်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေ လက်နက်ကိုင်လူအုပ်စုတွေလို အရမ်းနီးနီးကပ်ကပ်ရပ်နေတဲ့လူတွေကို ချုပ်ထိန်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ဒီအသံလက်နက်ရဲ့ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ အကျယ်အဝန်းကတော့ ပေ ၃၃၀ ဒါမှမဟုတ် ပေ ၁၀၀အတွင်းမှာဆိုရင် အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ပေ ၅၀ နဲ့ ၁၅ မီတာ အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ အကြားအာရုံကို တစ်သက်လုံး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ် LRAD Sound Cannon ဟာ အရမ်းအင်အားကြီးတဲ့ အသံလှိုင်းနဲ့ လုံးဝမျက်စိလည်လမ်းပျောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရမ်းဝေဖန်ခံနေရပါတယ် ဒီလက်နက်ဟာ ရန်မူနေတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းကို မခြောက်လန့်နိုင်ဘဲ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးရမယ့်အစား ဒီလူတွေက စိတ်ဖောက်ပြီး တစ်နေရာထဲမှာပဲရပ်နေတော့ သူတို့ရဲ့အကြားအာရုံတောင် ဆုံးရှုံးရမယ့်အထိဖြစ်နိုင်တာကြောင့် သူ့လိုရင်းကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါဘူး ဒီလက်နက်ကိုရော လူမဆန်ဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကြလား?
အခုအသစ်ပြောပြမယ့် လက်နက်က ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့မတူဘဲ ကျည်ထွက်အောင် သေနတ်ပစ်တယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းကြောင့် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် ဒီလက်နက်ကို DREAD လို့ခေါ်ပါတယ် သူကတစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိပြီးတော့ ယမ်းမှုန့်အစား ဗဟိုခွာအားကို သုံးပါတယ် သေနတ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ထဲမှာ ထူးခြားတဲ့အဝိုင်းတုံးလေးရှိပါတယ် ဒီအဝိုင်းတုံးက လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုသုံးပြီး လည်ပတ်လာပြီးတော့ ကိုယ်ထည်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျည်ဆံအဝိုင်းလေးတွေက အရှိန်မြင့်လာပြီး ပစ်မှတ်ကို ပစ်ခတ်ပါတယ် DREAD ဟာ ယမ်းမှုန့်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝမှာ ရန်သူကိုချိန်နိုင်တဲ့ အလင်းတန်းလေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် သေနတ်ချိန်ရတာ အနည်းငယ်တော့အခက်အခဲရှိပါတယ် ဒီသေနတ်က အသံလုံးဝမထွက်တာကြောင့် အမိုက်စားလေးဖြစ်စေပါတယ် ဒါပေမယ့် အရေးအပါဆုံးအချက်ကတော့ M16 သေနတ်က တစ်မိနစ်အတွင်း ကျည်ဆံပေါင်း ၉၀၀ ပစ်နိုင်ပေမယ့် DREAD ကတော့ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ကျည်ဆံပေါင်း ၁၂သိန်းပစ်နိုင်ပါတယ် ယဒီကျည်ဆံထွက်တဲ့အမြန်နှုန်းဟာ Assault Rifle ထက် ၂ဆပိုမြန်နေပါတယ် လောလောဆယ် ဒီသေနတ်ပုံစံကို တီထွင်သူ Trinamic က စံနမူနာအနေနဲ့ တီထွင်နေတာတွေရှိပေမယ့် အများကြီး ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး ဘယ်လက်နက်က ဖျက်ဆီးအားအကောင်းဆုံးလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်လဲ?
ကျွန်တော်တို့ အခုထပ်ပြောပြမယ့် လက်နက်ကတော့ သေနတ်ပစ်တိုင်းမှာ အရည်ထွက်လာမယ့် လက်နက်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလက်နက်က USA စစ်တပ်ရဲ့ အလားအလာကောင်းတဲ့ တီထွင်မှုတွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားနဲ့ ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ဒီလက်နက်ဟာ သေနတ်ပစ်တိုင်း အရည်ကျိုထားတဲ့ သတ္တုရည်တွေ အင်အားကြီးစွာနဲ့ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပစ်မှတ်ကို လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ပစ်ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ် အားကြီးတဲ့ တွန်းအားက ဒီအရည်လက်နက်ပစ္စည်းကို အလွန်မြန်တဲ့အရှိန်အဖြစ် မြှင့်တင်ပေးပါတယ် အရမ်းလေးလံပြီး ကာကွယ်မှုကောင်းတဲ့ တင့်ကားတွေကိုတောင် အပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် အရမ်းအားကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေတောင် ဒီသတ္တုအရည်ပျော်နဲ့ ထိတာနဲ့ ဖယောင်းအရည်ပျော်သလို အရည်ပျော်ကျသွားနိုင်ပါတယ် လောလောဆယ်တော့ ဒီလက်နက်ဟာ ထုတ်လုပ်ဆဲအခြေအနေမှာပဲ ရှိပါသေးတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ဒီသေနတ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဥ်ဝတ္ထု စာရေးဆရာ Arthur Clarke က သူ့ရဲ့ ဝတ္ထု “Earth Light” မှာ ဖန်တီးရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာဟာ အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဥ် ဖန်တီးမှုတွေကို လက်တွေ့ဘဝမှာ တီထွင်လာနိုင်စေပါတယ် စစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ဖူးတဲ့ ဘယ်ဖန်တီးမှုကို တီထွင်သင့်တယ်လို့ ထင်လဲ?
အမြှောက်သေနတ်ရဲ့ပြောင်းဟာ လက်ကိုင်သေနတ်ရဲ့ပြောင်းနဲ့ ဆင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လက်ကိုင်သေနတ်ထက် အဆတစ်ရာလောက်ပိုကြီးပါတယ် အနာဂါတ်က အမြှောက်လက်နက်တွေဟာ မီးရထားသံလမ်းလိုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ် ဒီလိုလက်နက်တွေကို Railguns လို့ခေါ်ပြီးတော့ အမြှောက်ပစ်ဖို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကို အသုံးပြုကြပါတယ် ဒီစက်ကွင်းတွေကို အင်အားကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားနဲ့ တီထွင်ထားပါတယ် မျဥ်းပြိုင်လိုပြိုင်နေတဲ့ အမြှောက်ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖိုဓာတ်မဓာတ်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် ဒီအမြှောက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နေအာက်ထပ်အရှိန်ကို ထုတ်လုပ်ပါတယ် ဒါတွေက အယူအဆသက်သက်ပဲဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဒီသေနတ်က အရမ်းအထင်ကြီးလောက်ပါတယ် ဒီလိုအရမ်းလေးလံတဲ့ အမြှောက်သေနတ်ကိုတောင်မှ ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အရှိန်မြှင့်တက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် ဘယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာမှ ရန်သူကို ဒီလက်နက်ရဲ့ရန်ကနေ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး ဒီသေနတ်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အမြှောက်ရဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ပျက်ဆီးလွယ်ပြီးတော့ လက်နက်က စွမ်းအားတွေ အရမ်းကုန်ခမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ အကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအမြှောက်က တစ်ခုခုကိုထိပြီးမှ ပိုအရှိန်မြန်လာတာကြောင့် သူက Washington ကနေ Philadelphia ထိ ၂မိနစ် ထက်ပိုမြန်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ပျံနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဖန်တီးမှုက အာရုံစိုက်ဖို့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုပေမယ့် အထူးအဆန်းဆုံးနဲ့ အထင်ကြီးရဆုံး လက်နက်က သာမန်သေနတ်တွေကို မေ့သွားစေနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်အာရုံကို အင်းဆက်ကောင်တွေပေါ် ရောက်သွားစေပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အခုပြောမယ့်ဟာက အရမ်းသေးငယ်မှုန်မွှားတဲ့ ဒရုန်းမဟုတ်ပါဘူး အင်းဆက်နဲ့တူတဲ့ ဒရုန်းမဟုတ်ပါဘူး တကယ်အသက်ရှိနေတဲ့ အင်းဆက်အကောင်တွေအကြောင်းကို ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ အဲ့အင်းဆက်လေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထူးခြားသေးငယ်တဲ့ အချပ်ပြားလေး တပ်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် သုတို့တွေကို တကယ့် စက်ရုပ်အင်းဆက်တွေလို ဆင်ဆာတွေတပ်ပေးပြီး နယ်မြေအကျယ်ကြီးမှာ အချက်အလက်စုဆောင်းဖို့ ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ပျံသန်းမှုကို အဝေးထိန်းခလုတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ ဦးမှင်၊ ဓာတ်ခဲ၊ အာရုံခံကိရိယာတွေ အကုန်ပေါင်းမှ ၀.၀၅ အောင်စ ဒါမှမဟုတ် ၁.၁၃ ဂရမ်သာ လေးတဲ့အတွက်ကြောင့် စက်ရုပ်အင်းစက်လေးတွေကို ပျံနိုင်စေပါတယ် ဒါကြောင့် နောက်ကျရင် ကိုယ့်အနားမှာ အင်းစက်တစ်ကောင် တစ်နေရာတည်းမှာ အကြာကြီး ဝဲနေရင် ဒါကတကယ်လို့ သူလျှိုတစ်ယောက်ရဲ့ စောင့်ကြည့်ခံနေရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဒီခေတ်သစ် လက်နက်တွေထဲမှာ ဘယ်လက်နက်က အလားအလာကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြလဲ?
Previous Article ကြီးမားတဲ့ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု့များ
Next Article 10မိနစ်အတွင်းကမ္ဘာကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်း